फेसबुक कत्तिको चलाउनुहुन्छ ? यस्ता गम्भीर कुराहरुलाई पनि ख्याल गर्ने कि ?
एजेन्सी । हामी प्रायः बालबच्चाहरुले कम्प्युटर तथा मोबाइल बढी नचलाउन सचेत गरिरहेका हुन्छौं । तर आफैं भने कत्तिको समाजिक सञ्जालमा लिप्त भईरहेका छौं भन्ने ख्याल गरिरहेका हुन्नौ । उनीहरुलाई खबरदारी त गर्छौं तर हामी आफैंले अत्यधिक मात्रामा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्दा उनीहरुमा पर्ने असरको बारेमा सोची रहेका हुँदैनौं ।
उक्त सर्भेक्षणले सामाजिक सञ्जालमा आमाबुबा लिप्त हुँदा यसले बालबच्चाका लागि खतरामात्र होइन उनीहरुको ज्यान समेत जानेसक्ने खतरानाक स्थिति पैदा गर्ने निश्कर्ष निकालेको छ ।
युनिभर्सिटी अफ मिसिगन र इलियन स्टेट युनिभर्सिटीमा भएको एक प्रयोगमा जुन बच्चाका आमाबुबामा फेसबुक जस्ता समाजिक मिडियाको नशा छ उनीहरुका बालबच्चामा आत्महत्या जस्तो खतरनाक प्रवृति बढ्ने गरेको पाइएको छ ।